Didipoitra amerikanina : hatrany amin’ny 100.000 Ar ny famoran-jaza | NewsMada
Didipoitra amerikanina : hatrany amin’ny 100.000 Ar ny famoran-jaza
Par Taratra sur 10/06/2016
Ankavitsiana sisa ireo ray aman-dreny manao famoran-jaza manaraka ny fomban-drazana rah any eto an-dRenivohitra. Efa mandroso be ny teknolojia. Betsaka ireo misafidy ny didipoitra amerikanina na ilay famorana tsy mandeha ra ary tsy dia mampijaly zaza loatra.
Tsy an’ny tsy manam-bola anefa ny fanaovana izany. Tafakatra hatrany amin’ny 100.000 Ar mahery ny saran’ny famorana zaza indrindra raha sarotsarotra ny fandidiana. Tsy azo atao tampotampoka ihany koa fa mila fanaraha-maso akaikin’ny dokotera ilay zaza mialoha ny hanatanterahana ny famorana.
Zaza salama tsara no atao didipoitra. Jerena ny taovam-pananahany raha tsy misy sampona na kely loatra na miraikitra ny hoditra. Mateti-pitranga amin’ny zazalahiley ankehitriny io fahasamponana eo amin’ny taovam-pananahana io raha ny filazan’ny dokotera ka mila mailo tsara ireo mpitsabo.
Mila fikarakarana manokana raha toa ka misy fahasamponana ilay taovam-pananahan’ilay zaza ary eo no tena maha lafo ny famorana. Miditra toeram-pandidiana mihitsy azan y sasany amin’ireny ankizy ireny indraindray. Tafakatra an’hetsiny ny vola lany amin’izany.
Raha toa ka tomombana tsara kosa ny taovam-pananahan’ilay zazalahikely, tsy manano-sarotra ny famorana azy. Mampiasa fanafody fanadontoana ny dokotera ary tsy mahare maharary ilay zaza. Avy hatrany dia akatona ny fery mba tsy hampandeha ny ra sy tsy haha-ela fery ny zaza.
Tsy maintsy misy kosa ny fanaintainana saingy azo hafiana ora iray aorian’ny fandidiana, hoy ny mpitsabo. Efa misy ny fanafody ahosotra amin’ilay taovam-pananahana voafora rehefa tonga any an-trano. Miverina any amin’ny dokotera manao fanaraha-maso afaka 5 andro hijerena ny fahasalaman’ilay taovam-pananahana noforaina.